Raaxada Gabdhaha Ay Jecelyihiin: U Sameey Sidaan - Cishqi
Inaad fahanto raaxada gabdhaha ay jecelyihiin ma ahan wax adag, u sameey sidaan: galmada nuucaan ah gabdhaha waxay ka helaan raaxo aan caadi ahayn.
Raaxada Gabdhaha iyo sida ay jecelyihiin
Marka hore waxaa fiican inaad isweydiiso, waa maxay raaxada gabdhaha ay jecelyihiin, maxay jecelyihiin gadbahaha? Jawaabtu weey fududahahay.
Raaxada gabdhaha ay jecelyihiin
Haddii aan nahay gabdho uma baahnin wax kale, kaliya in naloo sameeyo raaxo nuucaan ah. Waxyaabahaan soo socdo markii raga ay inoo sameeyaan waxaan ka qaadnaa raaxo aan caadi ahayn. Raga qaar waa kuwo yaqaano waxa aan jecelnahay balse waxa jiro kuwo badan oo ku jahwareersan raaxada gabdhaha ay jecelyihiin iyo sida ay ugu raaxeyn lahaayeen, taasina ma ahan wax fiican.
Gabdhaha intooda badan waa kuwo xishood badan laakin taasi macnaheedu ma ahan in aysan raaxo idin kaga baahneyn.
Gabdhaha qaar waa kuwo aad u dareen badan sidaas ay tahayna idin ma soo bandhigi karaan rabitaankooda laakin waxay idin muuji karaan in ay jecelyihiin raaxo bilaa hagar ah.
Qish, Mid kamid ah qormooyinka ku saabsan dumarka gaar ahaan: Raaxada Dumarka fircooniga ah
1. Ku bilaba raaxada gabdhaha si qooto qooto ah
Gabdhaha waxay u baahanyihiin xoogaa waqti ah si ay u gaaraan gariirka raaxada kulul, laakin waxba haka welwelin taasi m ahan wax adag. Si qooto qooto ah ugu bilaaba salsaaxida jirkeeda sida gacmaha, qoorta, cajiraha iyo goobaha kale ee dareenka leh. Ha degdegin hana iska waalin, ku wad si aayar ah meelba meesha kale, kadibna waxaad arkeysaa iyadoo ku xagxaganeyso misana baahalka gacanta la aadeyso.
Qish: Haddii aad tahay iskaabulo oo aadan weli guursan, waxaan halkaan kuugu diyaarinay calaamadaha gabadha ku rabto ama ku jecel: Baro 12 kaan calaamadooda ey ay gabdhdhu ka siman yihiin
2. Gabdhaha waxay jecelyihiin in la baashiyeeyo
Raga waxay umaleeyaan in raaxada gabdhaha ay tahay, kaliya in la geliyo baahasha, kadibna sidaas ay gabdhaha ugu raaxeeyeen laakin sidaas ma ahan. Waxay iloobaan in dhuuqmadu ay tahay tilaabada ugu horeyso oo uu dareenkeenu ku kaco. Hadaba si aad dareenka gabdhaha u kicisaan ha isku dayina inaad baahalkiina horay kagala aadaan. Maxaa yeelay gabdhaha kama helayaan raaxo macaan.
3. Eegmada Raaxada Gabdhaha: Fiiriya indhaheena
Eegmada indhaha gabdhaha
Raaxada gabdhaha ma ahan oo kaliya salsalaaxid, shumis iyo in baahalka iyo baahashu isdhex gelanaan ee sidoo kale eegmada dabacsan ee indhaheena waxay qeyb ka tahay raaxadeena.
Maxaa yeelay waxaan dareemeynaa raaxo aan caadi ahayn. U u eega indhaheena si dareen leh idinkoo muujinayo dareenkiina.
Waxaa laga yaabaa iney xaaskaaga kaa rajeyneyso oo ay jeclaan lahayd mar uun iney aragto adigoo indhaheeda fiirinayo si dareen ku jiro.
4. U taabo naasaha si dabacsan
Raga Qaar markeey naasaha taabanayaan waxay u taabtaan si xoogan oo majuujis ah, laakin taasi kama mid ahan raaxada gabdhaha ay jecelyihiin.
Waxaa laga yaaba gabdhaha qaar in ay xanuun dareemaan sidaa darteed u taabo si dabacsan. Waxaa macquul ah raga Qaar in ay ku caajisaan taataabashadaasi laakin anaga daqiiqad ka daqiiqad waan ku raaxeysaneynaa, waxaana dareemeynaa raaxo waali ah.
Gabdhaha qaar taataabasho ka Sukow waxay ku raaxeystaan oo kaliya gacmaha ninka inuu naasahooda saarnaadaan, kuleylkaasi diiran dartii.
5. Noo sameeya waxyaabo lama filaan ah
Sida gabdhaha loogu masaajeeyo
Haddii aan nahay gabdho waxaan jecelnahay waxyaabaha kediska ah oo lama filaanka ah, Qolka jiifka mar walbaa waxaa laga yaabaa in ay naga badbadato oo aan ku caajisno, sidaa darteed noo bedela boosaska, tusaale qolka fadhiga, suuliga, barandada, dalxiis meelo kale ah, iwm. Sidoo kale raaxada gabdhaha waxaa kamid ah masaajo, in loo masaajeeyo kadibna horay loo sii wado shaqada si aayar aayar ah.
6. Wax ka baro xaaskaaga cusub
Raga Qaar waxay yaqaanaan raaxo hal nuuc ah, waxay moodaan xaaskii hore iyo xaaska cusub in ay isku meel ka wada kacsadaan, Waxay umaleeyaan in gabar walbaa ay sidaas jeceshahay, taasina waa qalad. Hadaba baro sida loogu raaxeeyo xaaskaaga cusub iyo waxa ay jeceshahay.
7. Carabkiina marmariya meelahaan
Alla macaanaa markii carabka meelaha qaar la mariyo, sida qoorta, ibta naasaha, dhegaha iyo cajiraha. Waxayba gabdhaha moodaan goortaasi in ay joogaan beerta janada. Ka marmari xaaskaaga carabka goobahaasi kana dhuuq naasaha gaar ahaan naasaha ibtooda.
Waxaa jiro gabdho iyagana jecel in kintirka carabka laga mariyo, raga qaar aad beey u jecelyihiin halka kuwa qaar ay dhahaan meeshaas maan carabkeyga geli karaaa, Taasi diiniyan ma fiicno iyo balaa balaaa. Xusuusnow: Haweentu waxa ay beer u tahay ninkeeda.
Sheekh Maxamuud Ow Cabdulle Cariif
8. Salsalaaxida kintirka gabdhaha
Waxaa Jiro goobo badan oo ay tahay in kintirkeena laga salsalaaxo oo aysan dhicin, taasina waxay nagu adkeyneysaa inaan kacsano. Ku bixiya dadaal, salsalaaxa kintirka goorta aad u raaxeyneysaan gabdhaha. Taasi waa ku farxi doonaa, waa xaqiiqo.
9. Isu soo qurxiya raaxada gabdhaha
Ha umaleyn in Dumarka oo kaliya waajib ku tahay in ay isa soo qurxiyaan, isa soo carfiyaan, laakin raga xittaa waa ku waajib. U soo qubeysta, isa soo carfiya, iskana soo xiira bisiqa ama shuunka iwm. Hana iloobina inaad iska soo jartaan cijiyaha maxaa yeelay markaad farahiina nagu salsalaaxeysaan waxaa na mudmudayo cijiyahiina.
Ka taxadir xaaskaaga si ay u hesho raaxo lama ilaabaan ah, maxaa yeelay iyadaba weey kaa taxadirtaa.
Qish: Gabdho idinkana sidoo kale ka taxadira: Marxadalahani ma fiicno raaxada nimankiina
10. Amaana jirkeena ka hor raaxada
Aan idin qisho, gabdhaha badankood waxay jecelyihiin in la amaano jirkooda ka hor raaxada. Sababtoo ah markaad jirkeena amaantaan waxaan ka qaadeynaa kalsooni iyo kacsi xoogan. Waxaad imaaneysaan guriga iyagoo sugi la, inta aad ka soo qubeysaneysaan.
Markaan rabno inaan kicino dareenka raga ka hor raaxada waxaan u dirnaa: Erayada raga ay jecelyihiin oo aan ku amaanaa kuna soo jiidanaa dareenkooda sidaas si lamid ah noo soo dira erayo kuwaas oo kale ah oo na amaanaa ka hor raaxada sariirta.
Qish: Gabdhaha qaar waa kuwo xishoodo oo is qariyo, laakin waxaad ka dareemeysaan markaad aragto guriga oo carfayo iyo iyadoo albaabka kuu taagan si ay hab iyo shumis kugu bilaawdo.
Intaas oo kaliya kuma koobno raaxada gabdhaha ay jecelyihiin ee waxaa jiro waxyaabo kale oo ay gabdhuhu ka helaan. Haddii aad xiiseyneyso inaan kula wadagno maqaalo kale oo xiiso leh, halkaan hoose iska diiwaangeli.